Ummandla waseParis ka-1871 | Ubume kunye neNyaniso
Imbali kunye neNkcubeko Iingqungquthela & Iimvukelo
Oko kwakunjalo, Yintoni eyabangela ukuba, kunye nendlela i-Marxist Thinking Inspired It ngayo
I-Commune yaseParis yayiyinkokheli yentando yesininzi ekhokelwa nguRwanda kusukela ngo-Matshi 18 ukuya kuMeyi 28, 1871. Ephefumlelwe yizopolitiko zeMarxist kunye neenjongo zokuguqula i-International Workingmen's Organisation (eyaziwa ngokuba yi-First International), abasebenzi baseParis babumbene umbuso waseFransi okhoyo owakwazi ukukhusela isixeko kwi- Prussian besizinge , waza wabumba urhulumente wokuqala wenkululeko kwidolophu nakwi-France yonke.
Ibhunga elikhethiweyo le-Commune linikeze imigaqo-nkqubo yezentlalo kwaye ijongene nemisebenzi yedolophu kwiinyanga ezingaphezu kweenyanga ezimbini, kude kube yilapho umkhosi waseFransi ubuyisela umzi kwiRhulumente waseFransi, wabulala amashumi amawaka abasebenzi baseParis ukuba benze njalo.
Iziganeko eziya phambili kwi-Commune eParis
I-Commune yaseParis yenziwa kwizithende ze-armistice esayinwe phakathi kweRiphabhlikhi yesiThathu yaseFransi kunye namaPrussia, eyayijikeleze isixeko saseParis ukususela ngoSeptemba 1870 ukuya ngoJanuwari 1871 . Ukuvinjelwa kwaphela ngokunikezelwa kwempi yaseFransi kumaPrussia kunye nokusayina kwe-armistice yokuphelisa imfazwe ye-Franco-Prussian War.
Ngeli xesha ngexesha, i-Paris yayinabantu abaninzi abasebenzayo-baninzi isiqingatha sezigidi zabasebenzi basezimbonini kunye namakhulu eenkulungwane zabanye-abaxinzelelekileyo kwezoqoqosho kunye nezopolitiko ngumbutho olawulayo kunye nenkqubo yemveliso yongxowa-mali , kunye noqoqosho oluhlelelekileyo imfazwe.
Abaninzi balaba basebenzi bakhonza njengamajoni oLondolozo lukaZwelonke, umkhosi wamavolontiya owawusebenza ukukhusela isixeko kunye nabemi bawo ngexesha lokungqingwa.
Xa i-armistice isayinwe kwaye iRiphabliki yesiThathu yaqala ukulawula kwayo, abasebenzi baseParis kwaye bayesaba ukuba urhulumente omtsha uza kufaka ilizwe ukuba libuyele ebukumkani , njengoko kwakukho abaninzi abalawuli beengcali.
Xa i-Commune iqalile ukwenza isakhiwo, amalungu e-National Guard axhasa imbangela kwaye aqala ukulwa nomkhosi waseFransi kunye noorhulumente okhoyo ukulawula izakhiwo zikaRhulumente eziphambili nezixhobo zaseParis.
Ngaphambi kwe-armistice, amaParisi abonisa rhoqo ukuba afune urhulumente okhethwe ngentando yeninzi kwisixeko sawo. Ukuxhatshazwa phakathi kwabo baxhasa urhulumente omtsha kunye noorhulumente osele uqhutywe emva kweendaba zeFrance ezinikezelwa ngo-Oktobha 1880, kwaye ngelo xesha kwenziwa umzamo wokuqala wokuthatha izakhiwo zikaRhulumente nokwenza urhulumente omtsha.
Ukulandela ukuxhaswa kweengcingo, ukuqhubezela kwaqhubeka nokunyuka eParis kwaye kwafika intloko ngo-Matshi 18, 1871, xa amalungu e-National Guard aphumelela ngokubamba izakhiwo zikaRhulumente nezixhobo.
I-Commune yaseParis - Iinyanga ezimbini zoLuntu, iDemocratic Rule
Emva kokuba i-National Guard ithathe indawo ebalulekileyo yolawulo karhulumente eParis ngo-Matshi 1871, i-Commune yaqala ukuma njengamalungu eKomiti Ephakathi iququzelele ukhetho lwentando yesininzi lwamabhansela awayeza kulawula isixeko egameni labantu. Amalungu amabhunga amathandathu anyuliwe kwaye aquka abasebenzi, oomashishini, abasebenzi beeofisi, intatheli, kunye nabaphengululi nabalobi.
Ibhunga lizimisele ukuba i-Commune ayinayo inkokheli enye okanye nayiphi na amandla amaninzi kunabanye. Kunoko, basebenze ngentando yesininzi kwaye benza izigqibo ngokuvumelana.
Ukulandela ukhetho lwebhunga, "iiCommards," njengoko zibizwa ngokuba zibizwa, zaphunyezwa uluhlu lweenkqubo kunye nemigangatho echaza okokuba intando yenhlalakahle, urhulumente wenkululeko kunye noluntu kufuneka libukeke ngathi . Imigaqo-nkqubo ijolise ngokuhlwa kwamagunya okuba namandla ekhoyo anelungelo labo abanamandla kunye namacandelo aphezulu kunye nokunyanzeliswa koluntu lonke.
I-Commune yasusa isigwebo sokufa kunye nokubhalwa kwezempi . Ukufuna ukuphazamisa amandla omsebenzi wezoqoqosho, baqeda ukusebenza ebusuku ebusuku kwizibhabhi zedolophu, banikezelwa iipenshini kwiintsapho zalabo babulawa ngenkathi bekhusela i-Commune, kwaye banqumla ukunyuka kwemali kwiityala.
Ukugqeba amalungelo abasebenzi ngokumalunga nabanikazi bamashishini, i-Commune yabonisa ukuba abasebenzi bangathatha ishishini ukuba lishiywe ngumnikazi walo, kwaye abaqeshi abavaliweyo ukuba bangafaki abasebenzi njengendlela yokuqeqesha.
I-Commune iphinde ilawulwe nemigaqo yelizwe kwaye yaqalisa ukuhlukana kwecawa kunye nombuso . IBhunga lenze ukuba inkolo ayifanele ibe yingxenye yesikolo kwaye ipropati yesonto kufuneka ibe yipropati kawonkewonke ukuze bonke basebenzise.
IiKhanard zikhuthaza ukusekwa kwamaKhosi kwezinye iidolophu zaseFransi. Ngethuba lokubusa kwalo, amanye awamiselwa eLyon, eSaint-Etienne naseMarseille.
Iingcamango ezifutshane ezimfutshane zeSocialist
Ubukho obuncinane beCommunity yaseParis babhekene nokuhlaselwa ngumkhosi waseFransi osebenza egameni leRiphabhliki yesiThathu, eyayixinzelele kwiVersailles . NgoMeyi 21, ngo-1871, umkhosi wawushukumisa isixeko waza wabulala amashumi amawaka aseParis, kuquka nabasetyhini kunye nabantwana, egameni lokuphinda umzi weRiphabhliki yesiThathu. Amalungu eKomkhulu kunye noLondolozwe kaZwelonke balwa, kodwa ngo-28 kaMeyi, umkhosi wawunqobe u-National Guard kwaye uMasipala wawungekho.
Ukongezelela, amashumi amawaka athathwe njengabotshwa ngumkhosi, abaninzi babo babulawa. Abo babulawa "ngeveki egazini" kwaye abo babanjwe njengamabanjwa bangcwatyelwa emangcwabeni angabonakaliyo malunga nomzi. Esinye seziza zokubulawa kwabantu baseCommards kwakusemangcwabeni ahloniphekileyo asePère-Lachaise, apho ngoku ikhona isikhumbuzo kubabuleweyo.
Umasipala waseParis noKarl Marx
Abo bajwayelene nokubhala kukaKarl Marx banokuthi baqaphele iipolitiki zakhe kwiinjongo ezisemva kweCommunity Commune kunye neempawu ezizikhokele ngexesha lolawulo olufutshane. Kungenxa yokuba iikholeji ezikhokelayo, kuquka uPerre-Joseph Proudhon noLouis Auguste Blanqui, babambene kunye kwaye baphefumlelwe ngamanani kunye nezopolitiko ze-International Workingmen's Association (eyaziwa ngokuba yi-First International). Le ntlangano yasebenza njengentambo yamazwe ngamazwe ahlangeneyo, ama-communist, socialist, kunye nabasebenzi. EkwaseLondon ngo-1864, uMarx wayelungu elichaphazelayo, kwaye imigaqo kunye nenjongo yombutho yabonakalisa abo bachazwa nguMarx no-Engels kwiManfesto yeCawa yamaKomanisi .
Omnye unokubona kwiinjongo kunye nezenzo zeCommunards ukuqonda kweklassi ukuba uMarx wayekholelwa ukuba kuyimfuneko yokuguqulwa kwabasebenzi ukuba kwenzeke. Enyanisweni, uMarx wabhala malunga noMasipala kwiMfazwe yoLuntu eFransi ngoxa kwakwenzeka kwaye wachaza njengemodeli yokuguquka, urhulumente othatha inxaxheba.
Imibuzo YokuFundisisa yeGatsby
Iikhosi kufuneka Ufike esikolweni seMed
Kubaluleka kokugcina iNcwadi